राजधानीका सिनेमा हलमा लाग्यो बक्स अफिस ! - Nepali Cinema News
Home > Nepali > राजधानीका सिनेमा हलमा लाग्यो बक्स अफिस !
राजधानीका सिनेमा हलमा लाग्यो बक्स अफिस !
July 17, 2018 Nepali
लामो समय देखी चलचित्रकर्मीहरुले माग गर्दै आइरहेको बक्स अफिस सिस्टम लागु भएको छ । मंगलबार चलचित्र बिकास बोर्डको हलमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी सुचना तथा संचार मन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटाले औपचारीक रुपमा बक्स अफिस सिस्टमको उद्घाटन गरेका छन् ।
अब भने राजधानीका ११ ओटा मल्टीप्लेक्स र ९ ओटा सिंगल सिनेमा हल गरी २० ओटामा बक्स अफिस सिस्टम जडान गरीएको छ । यो सिस्टम लागु भए सँगै राजस्व छल्दै र निर्मातालाई मार्कामा पार्दै आईरहेको भन्ने आरोपबाट हल ब्यावसायीहरु मुक्त हुने भएका छन् । यो सिस्टमले कुन चलचित्रले कुन सिनेमा हलमा कुन शो मा कती ब्यापार गर्यो भन्ने कुरा छर्लङ्ग बनाउने छ ।
मन्त्री बासकोटाले चलचित्र क्षेत्रलाई उद्योगको रुपमा स्थापीत गर्ने यो पहिलो कदम भएको बताएका छन् । उनले अगाडी थपेःअहिले राजधानीका २० ओटा हलमा मात्रै बक्स अफिस जडान गरीएको छ, यो सुरुवात हो, अर्को वर्षको असार मसान्त भित्र नेपालका सम्पुर्ण सिनेमा हलमा बक्स अफिस सिस्टम जडान हुने छ ।
सयौं चलचित्रकर्मीहरुलाई संबोधन गर्ने क्रममा उनलेः चाँडै नै सिनेमा हलहरुको पनि वर्गीकरण गरीने र यो क्षेत्रलाई सभ्य, मर्यादीत, सु सम्पन्न उद्योगको रुपमा स्थापीत गर्न आफुले कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता पनि ब्यक्त गरेका छन् ।
बक्स अफिस लागु भए सँगै दर्शकले टिकट काट्दा तिरेको मनोरञ्जन कर र बिदेशी सिनेमामा लाग्दै आएको बिकास शुल्क कुनै पनि हल ब्यावसायीले खान पाउने छैनन्, र त्यो हिसाब सिधै राज्यको खातामा जानेछ ।